"1 Eny, izany no mampitepotepo ny foko ka mampiemponempona azy hiala amin’ny fitoerany. 2 Mihainoa dia mihainoa ny fikotrokotroky ny feony sy ny rohona izay mivoaka avy amin’ny vavany. 3 Mandefa izany ho eny ambanin’ny lanitra rehetra Izy, ary ny helatra hatramin’ny faran’ny tany. 4 Manarakaraka izany, dia misy feo mirohondrohona; Mampikotrokotroka ny feon’ny fahalehibiazany Izy, ka rehefa re ny feony, dia tsy sakanany ny helatra. 5 Mahagaga ny fikotrokotrok’Andriamanitra amin’ny feony; Manao zava-dehibe tsy takatry ny saintsika Izy. 6 Fa ny oram-panala baikoiny hoe: Milatsaha eny ambonin’ny tany hianao; Ary toy izany koa ny ranonorana mivatravatra, eny, dia ny ranonorany mivatravatra mafy. 7 Mampiohona ny tanan’ny olona rehetra Izy, mba samy hahalala izany ny olona rehetra izay nataony; 8 Ary miditra ao am-piereny koa ny bibi-dia ka mamitsaka ao an-davany. 9 Avy any atsimo ny tadio, ary entin’ny rivotra avy any avaratra ny hatsiaka. 10 Ny fofonain’Andriamanitra mahamisy ranomandry, ka voageja ny rano malalaka. 11 Ny rahona matevina tambesarany rano, ary ny rahon’ny helatra dia ampieleziny; 12 Dia mihodinkodina araka ny fitarihany azy ireo hanatanteraka izay rehetra andidiany azy eny ambonin’ny tany eran’izao tontolo izao, 13 Na alatsany ho famaizana raha tokony ho an’ny taniny izany na ho famindrampo kosa. 14 Mihainoa izany, ry Joba; Mijanona, ka mba diniho ny fahagagana ataon’Andriamanitra. 15 Fantatrao va ny fanamboaran’Andriamanitra ireny sy ny fampitselatselany ny helatry ny rahony? 16 Fantatrao va ny fihevahevan’ny rahona matevina, dia ny fahagagana avon’Ilay tanteraka amin’ny fahalalana? 17 Hianao izay mahatsiaro ny fitafianao ho mafana, raha migaingaina ny andro azon’ny rivotra avy any atsimo, 18 Moa hianao niara-nanao taminy va, raha namelatra ny habakabaka Izy, izay mitoetra mafy toy ny zavatra manganohano natao an-idina? 19 Mba ampianaro anay ary izay holazainay aminy; Fa tsy hitanay izay halahatray noho ny aizina, 20 Holazaina aminy va, raha miteny aho? Moa misy olona maniry ho levona tokoa va? 21 Tsy hita ankehitriny ny mazava, Izay mamirapiratra any amin’ny rahona: Nefa raha mandalo ny rivotra, dia mampisava azy ihany izany. 22 Avy any avaratra no ihavian’ny mazava mitarehim-bolamena; Ao amin’Andriamanitra ny voninahitra mahatahotra. 23 Ny Tsitoha, tsy mahita Azy isika; Izay lehibe amin’ny hery sy ny fitsarana mbamin’ny fahamarinana tanteraka dia tsy mba mampahory. 24 Koa izany no atahoran’ny olona Azy; Tsy mety mijery izay manao azy ho hendry Izy." Joba 37:1-24
Toetr’andro. Ny olombelona dia manana fanazavana ara-tsiantifika momba ny fiforonan’ny orana, ny mahatonga ny kotroka sy ny tselatra. Fanazavana fotsiny anefa no omeny fa tsy voafehiny velively mihitsy ireo ka mitondra faharavana isan-karazany etsy sy eroa eto amin’izao tontolo izao amin’ny fotoana sasany. Izay no nahatonga an’i Eliho hilaza eto fa baikoin’Andriamanitra ireny ary fitaovan’ny fahatezerany. Manana fahefana amin’ireny tokoa Andriamanitra. Tsaroantsika Jesosy Kristy nibaiko ny rivotra sy ny ranomasina hoe : mangìna! mitsahara! Tamin’izay dia talanjona tokoa ny mpianatra ka nifanontany hoe: Iza loatra re ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky Azy? Matio 8:27
Diniho. Eo anatrehan’izany dia taomin’i Eliho hisaintsaina i Joba hoe tsinontsinona izy manoloana izany herin’Andriamanitra izany. Tiany ampitaina amin’i Joba dia ny hoe be dia be ny zavatra ataon’Andriamanitra tsy ho vitantsika mihitsy ny hanazava azy ary tsy azontsika terena koa Andriamanitra hanazava izany amintsika.
Manàna fanantenana. Ity tenin’i Eliho ity no mampiravina ny resak’ireto mpisakaiza ireto satria miaiky ihanyI Eliho eto hoe tsy hitany izay alahatra noho ny aizina (19b). Toa midika hoe raha miaiky ianao izany fa tena tsy nanota tokoa dia tena misy zavatra tsy azonay koa izany ny fandehan’ny tantara eto. Izao anefa no ampitainy koa amin’i Joba hoe tsy maintsy mbola hisava io rahona matevina manakona ny masoandrom-piainanao io (21).